Ithegi: umsila omde | Martech Zone
Maka: umsila omde
Luluphi uhlobo lwefuthe lokuThengisa kuMxholo kwiiNqanaba zokuKhangela
Njengokuba ii-algorithms zeinjini yokukhangela ziba ngcono ekuchongeni nasekubekeni umxholo ofanelekileyo, ithuba leenkampani ezibandakanyeka kwintengiso yomxholo liya likhula ngakumbi nangakumbi. Le infographic evela kwi-QuickSprout yabelana ngamanani angakholelekiyo angenakuhoywa: Iinkampani ezineeblogi zihlala zifumana i-97% ngaphezulu kuneenkampani ngaphandle kweebhloko. I-61% yabathengi iziva ngcono malunga nenkampani enebhlog. Isiqingatha sabo bonke abathengi bathi ukuthengiswa komxholo kube nefuthe elihle
Lumka-Ukhangelo lukaGoogle luyayihoya iLongtail yakho
NgoLwesibini, Januwari 15, 2013 NgoLwesibini, Septemba 24, 2013 UNikhil Raj
Siveze omnye umbandela owahlukileyo izolo xa sijonga ukusebenza kweinjini zethu zokukhangela eziphilayo. Ndithumele ngaphandle kwaye ndaphonononga umbono kwaye ndicofa idatha kwiiGoogle Console Izixhobo kwaye ndabona ukuba akukho zibalo ziphantsi, zeros kuphela kunye nokubala okukhulu. Ngapha koko, ukuba ubuyikholelwa idatha ye-Google Webmasters, ekuphela kwemiqathango emikhulu eqhuba ukugcwala kwabantu yayiligama lophawu kunye nemigqaliselo yokhuphiswano olunikwa umthengi. Kukho ingxaki, nangona.